Meals on Wheels Kitchen of Fursadaha waa jikada ugu horeysa ee loogu tala galay in lagu bixiyo cunnooyinka barnaamijyada Cuntada ee Twin Cities oo ku yaal koonfurta Minneapolis. Mutadawiciin ayaa loo baahan yahay si ay uga caawiyaan howlaha sida duubista rootida, jarjar khudaarta, qaadashada cajiinka buskudka, iyo isu soo uruurinta cuntada maalin walba la keenayo. Tabaruceyaashu waxay door muhiim ah ka cayaaraan awood u siinta jikada inay soo saarto ilaa 1,500 oo cunto ah maalintii dadka u baahan.
Haddii aad raadineyso waddo aad tabaruc ugu sameyso Cunnooyinka Taayirada ee aan ku tiirsaneyn ku shaqeynta gaari ama aad ku raaxeysan karto muuqaalka gadaal ka eeg sida cunnadeenna loo diyaariyo, tani waa fursad weyn. Wareegyada jikada ayaa la heli karaa 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo Isniinta-Jimcaha ilaa afar qofna way tabarrucayaan inta lagu jiro shaqooyinka 1.5 - 2-saac.
Is qor maanta si aad ugu wareejiso Jikada Fursadaha oo ay saameyn weyn ku yeeshaan nolosha dadka waaweyn ee waaweyn iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah. Si aad u ogaato waxa laga filayo markaad tabaruceyso jikada, eeg liiska su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose. Waxaad sidoo kale soo diri kartaa emayl [email protected] ama wac (612) 623-3363 wixii macluumaad dheeraad ah.
Tabaruceyaashu waxay iska xaadiriyaan bilowga shaqadooda jikada halkaasoo laga siin doono liiska howlaha maalintaa. Hawlaha jikada ee caadiga ah waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, duubista duubista rootiga, jarjar khudradda, maraqa baakadaha, qaadashada cajiinka buskudka, iyo isu-uruurinta cuntada maalin walba la keenayo.
Wareegyada jikada ayaa la heli karaa wakhti kasta inta u dhexeysa 9 subaxnimo ilaa 3 galabnimo Isniinta-Jimcaha. Isdiiwaangeli waqti adiga kugu habboon waxaadna la shaqeyn kartaa maareeyahayaga mutadawiciinta ah si aad jadwal ugu sameyso isbeddellada joogtada ah ee socda.
Wareejintu waxay socotaa 1.5 ilaa 2 saacadood iyadoo kuxiran helitaankaaga. Wareegyada waxaa la heli karaa inta u dhexeysa 9ka subaxnimo ilaa 3da galabnimo maalin walba.
Haa! Waxaan la qabsan karnaa ilaa afar mutadawiciin ah inta lagu jiro shaqo kasta jikada. Haddii aad haysato koox ka weyn afar oo jecel inay tabaruce ka noqdaan jikada, fadlan emayl u soo dir [email protected] waxaanan ku dadaalaynaa inaan qorsheynno oo aan meel siino kooxdaada.
Jikada Fursadaha waxay ku taal 3025 4th Ave. S., Minneapolis, oo ku taal ama u dhow khadadka basaska 11, 21 iyo 27. Gawaarida la dhigto waxaa laga heli karaa meesha yar ee woqooyi ka xigta 31st Street inta udhaxeysa 4aad iyo 5aad Ave (sawirka hoose), haddii kale waxaa jira baarkin fara badan oo bilaash ah.
Maxaan sameeyaa haddii naftayda ama xubin qoyska ka mid ahi ay jiran yihiin ka hor beddelkayga?
Haddii adiga ama qof kale oo gurigaaga ka mid ahi uu ku xanuunsaday calool xanuun 72-kii saac ee la soo dhaafay awood uma yeelan doontid inaad iskaa wax u qabso ugu shaqeyso jikada maalintaas. Fadlan la xiriir maareeyahayaga tabaruca ah haddii aad u baahan tahay inaad kansasho shaqadaada.
Haddii aad tahay mutadawiciin jikada cusub, fadlan buuxi foomka iskaa wax u qabso ah ama naga soo wac 612-623-3363. Haddii aad tahay mutadawiciin jikada ku soo laabanaya, fadlan iska qor isweydaarsigaaga adigoo isticmaalaya Tabaruce Hub.